एउटा मास्कको मूल्य १० लाख ! – News Np Online
आज बिहानै मेयर ले भने म प्रबिन को हत्यारा समाउन सक्दैन
आखिर एका एक किन भाइरल भयो यो तस्बिर ? मोटाइन् कि गर्भवती छिन् प्रियंका चोपडा ?
३१ वटा औला भएकी अनौठी बच्ची जन्मिएपछि हेर्ने मानिसको भिड, धेरैले भगवानको स्वरप भन्दै गरे पुजा
डिभोर्स पछि पहिलोपटक मिडियामा आएकी प्रतिभाले रुँदै भनिन्, “मलाई बखतले मोहनी मन्त्र लगाएर लगेको रहेछ ।” (भिडियो हेर्नुस्)
सुँगुरले २ टाउको र ३ वटा आँखा भएको अनौठा बच्चा जन्माएपछि हेर्न आउने मानिसको भिड, कतिले त भगवानको स्वरुप भन्दै पुजा गरे
पहिले कमेन्ट गर्नु भन्दा एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस्
आफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर फेसबुकमा लब परेको के’टा स’ङ्ग भा’ग्दा मुम्बईमाबे’चिन पुगिन बिमला
दाँतमा किरा लागेर एकदमै पिडा हुन्छ ? यसरी कम गर्न सकिन्छ दुखाइ
अभिनेत्री करिनालाई धोका दिएर गुप चुप मीरासंग बिहे गरेका नायक शाहिद कपुरको छ करोडौको बंगला,बंगला भित्र देखिन्छन् यस्ता रमणिय द्दश्य
इतिहास रच्दै रबि लामिछानेले यसरी धुमधामसँग खोले नयाँ टिभी ,आउनेछन् यस्ता कार्यक्रम (भिडियो हेर्नुस)
मुख्य पृष्ठ /Intresting/एउटा मास्कको मूल्य १० लाख !
एउटा मास्कको मूल्य १० लाख !
टोक्यो (एजेन्सी) । जापानको राजधानी टोक्योमा कोरोना भाइरसलाई चिन्ता यथावत नै छ । यसबीच एक चर्चित डिजाइनरले आफनो रचनात्मक क्षमता देखाएकी छन् । डिजाइनरले मुल्यवान सक्कली मोतिबाट अत्यन्तै आकर्षक मास्क तयार गरेकी छन् । मास्कको मुल्य पनि करिब १० लाख यन भन्दा बढी नै छ । रिको कवनिशीले आफनो कम्पनी उनका पिताले विगत ३५ बर्षदेखि टोक्योमा सजावटका सामान बनाउने काम गरिरहँदा शुरु गरेकी थिइन् ।
साउथ चाइना पोस्टलाई रिकोले भनिन् , म एउटा त्यसतो कुरा बनाउन चाहन्छु, जसले जापानको सुन्दरता झल्काओस । त्यसका लागि मैले बनाउने बस्तुमा मोतीको प्रयोग हुने छ र मैले कोरोनाका कारण एक फन मास्क बनाउने योजना बनाए । सक्कली मोतीका मास्क बनाउन ३ दिन लाग्छ । यसका लागि फरक फरक साइजका ३ सय १० सक्कली मोतीलाई एक मास्कमा उनिन्छ ।
अकोया मोती सामान्यतया माला बनाउनमा प्रयोग हुन्छ तर रिकोले भनिन् , जब मैले मोतीलाई आफनो अनुहारमा लगाएँ, मेरो स्किन राम्रो देखियो । रिकोले यसलाई त्यसरी तयार गरेकी छन्, जब त्यसलाई अनुहारबाट हटाइन्छ यो घाँटीमा माला जस्तो देखिनेछ ।
यसअघि पाकिस्तानमा पनि एक डिजाइनरले बनाएको ब्राइडल मास्क चर्चित भएको थियो । उक्त मास्कले भाइरसबाट सुरक्षा दिने मात्र नभइ हेर्दा पनि अत्यन्त आकर्षक देखिन्थ्यो । यो मास्कलाई दुलहीको पहिरणसँग मिल्ने गरी बनाइरहेको छ । उक्त ब्राइडल मास्कलाई क्रिस्टल, लेस आदीले सजाइएको छ । ३ देखि ४ हजार रुपैयाको उक्त मास्क पाकिस्तानी दुलहीहरुले अत्यन्त रुचाएका छन् ।
शनिको साढे सातको दशा कसैमा एक पटक देखा परेमा यसले निकै ठुलो क्षति पुर्‍याउने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
‘मसंग जे छ त्यो म देखादिन सक्छु तर कसैलाई मेरो शरिर सुम्पन सकिन’: सोनिका रोकाय (भिडियो हेर्नुस्)
आफ्नो प्रेमी’सँग कुरा गर्दा गर्दै फे’सबुक LIVE मै यस्तो, जुन भि’डियो एक करोडले हेरे (भि’डियो सहित)
जसका कलिला हातले दिन्छन् बेवारिसे शवलाई दागबत्ती
यी हुन् भगवान गणेशका ११ स्वरुप, कस्को पूजा गर्दा के फल मिल्छ ?